Dhalinyarta Maantay iyo Qabiil Maxaa kala heeysta??? (Qeybti 2,aad) Dhamaad.
Thursday November 13, 2008 - 12:04:47 in Maqaallo by Xarunta Dhexe
Waxaa na asiibay hadii aan nahay dhalinyarada soomaaliyeed dhibaaatooyin xadkooda dhaafay, kuwaas oo ah kuwa aysan jirin cid noola qiirooneyso ama xataa qirsan in ay nagu dhaceeyso.
Waxaana ka mid ah dhibaatooyinkaas foolxumada badan kuwaan:
1. In aad la saaxiibtid oo aad aamintid qof aad soomaali ka sokow isku qabiil tihiin: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Dhalinyarta badankooda waxaa waalidkood ku shubeen in aysan aaminin kuna kalsoonaanin qof aan aheeyn DADKIISA, micnaha qabiilkiisa.
Taas waxeey sababtay in aan qofna kula saaxiibin in aan isku fahmeeyno dabeecad ahaan, iyo waliba in qofkaas aan isku xiiso iyo feker nahay.
Balsa aan baadi goobno qof ah qabiilkeena, oo nala wadaaga magac oday soomaaliyeed oo waa hore dhintay. Laakiin qofka dhalinyarada ah ee aqliga saafiga ah iyo qalbiga weyn oo soomaalinimada iyo islaanimada ka buuxdo sidaas wax uma doorato ee waxeey u aamintaa, una jeclaataa qof Illaah dartiis ayadoonan fiirineynin midibkiisa, qabiilkiisa, shaqadiisa iyo noloshiisa shaqsiga ah.
Waxuuna qofka ku doortaa is fahan, isku dabeecad, diintiisa iyo daacadnimadiisa iyo waliba inuu yahay qof an laheeyn calaamad ka mid ah calaamadaha munaafiqiinta sida beenta, qiyaanada, balan ka baxa iyo laba wajiilinimada.
2. In aad guursatid qof aad isku qabiil tihiin:
Arintaan guurka waa mida ugu dhibka iyo kadeedka badan oo sababta
QABIIL NAGULA DHICI KARTA HADII AAN NAHAY DHALINYARTA SOOMAALIYEED. Maxaayeelay waalidkeen waxeey aaminsanyihiin " Waxaad taqaanaa la guursadaa wax aad taqaano ha ku dhashee!" Maahmaahdaas oo ah dabcan mid oo yiri qof tiisa ka hadlay, asigoo kala soocaa soomaalida, una diidan qayb ka mid ah jiritaanka iyo waliba in la guursan karo.
Dabcan qofkaas waa naga guuleeystay oo maantay dhalinyaru oo badan oo naga mid ah waxaa loogu diidaa guur iyo nolol naxariis iyo jaceyl leh sababta
QABIIL. Waxaa la hubaa oo aan aheeyn sheeko ku tiri kuteen ah in waalidiin soomaaliyeed gabadhoodii u diideen wiil loo nisbeeynaayay inuu yahay soomaalida laga badanyahay, kadibna oo wiilkii bedeshay magacii iyo soomaalinimadii asigoo sheeganaa inuu yahay dadyowgaan kale uu asal ahaan ka yimid Afrikada madoow, balsa ku dhashay kuna koray Mareykan, lana soo siiyay gabadhii sababta inuu sheegtay inuu yahay nin madow laakin aan aheeyn soomaalida naga mid ah ee la liido.
Waa suaale maxeey ku kala bedelanyihiin kan soomaaliga ah oo aan la liidin iyo kan soomaaliga ah ee la liidaa? .Soo labadoodaba sagaal bilood caloosha hooyadood kuma jirin, asaal ahaan Aadan iyo Xaawo kama wada imaan? Sooma Rabi biliaadanka kuma kala dooranin, oo kuma soo kala dhaweeysanin inta ay la egtahay cabsidooda ay Illaah ka cabsadaan?
Waxaan ognahay in wiil iyo gabar walba oo is jecel ay maantay dhibaatadaas u bandhiganyihiin, weli iska celin karin, waxaana la hubaa in boqolkiiba sagaashan ay yihiin kuwa la kulmi doono cunaqabateyna jaceylkooda sababta QABIIL.
Kuwa badan ayaa loo dudumiyay guryahooda iyo jaceylkooda sababta QABIIL, dhalinyaro badan ayaa naftooda u waayay ayagoo raadinaa qofka ay jecelyihiin oo sababta QABIIL looga xaaraantinimeeynaa.
Mida kale oo ah dabcan wax lala yaabo, mudan in qofwalba iskala weeynaado ayaa ah in aan rumeeysanahay in hadii gabadhaan/wiilkaan aan jecelnahay uusan aheeyn qabiilkeena oo birito meel cidlaha ah nooga tegi doono, na qiyaami doono ama DAN GAAR AH naga leeyahay, maalinka oo gaarane na silcin doono.
Taas waa been ay naga dhaadhacsiiyeen dad aan aqoonin wanaaga iyo wada noolashada soomaaliyeed khaas ahaan tan dhainyaranimo iyo lamaane.
Waxaa faafiyay dad raba toogashadeena iyo kala tageena.
Meeqo isku qabiil ah, ilmo adeer/abti ah ayaa maantay noloshooda kala faniin iyo yaa taqaanaa ku dhamaatay?
Meeqaa shalay magaca oday dhintay la iskugu hibeeyay oo aan maantay xataa is fiirin karin, xariirkooda walaaltinimo go'ay oo salaanta islaamka isku quurin ceebta iyo ciqaabka ay isku geesteen dartood?
Meeqaa maantay ilmahooda laga qaatay oo ninkii/marwadii shalay la lahaa waa qabiilkeena ay la tagtay oo aan la arkin?
Bal adba! Hadii aanan had ka hortagen, oo aan ka wada tashanin sida aan ka yeeli laheeyn dhaqankaan foolxumada badan oo mustaqbalkeena lagu duduminaa dhalinyaro waxaan noqon doonaa kuwa waligood u afduuban eray oo yiri oday wa hore dhintay, oo dunidiisa ka qaatay intuu ku lahaa inuu teena noo aqoonsadane diyaarka ah.
Waa in aan la dagaalannaa si aan loo sii waddin dhaqan xumadaan aysan baneeynin diinteena wanaagsan iyo aqligeena saafiga ah.
Hadii kale waxaa qofwalba oo naga mid ah kaligiis lagu waajib yeeli doonaa inuu is dhiibo, oo ka quusto jaceylkiisa, kuna noolaado nolol uusan ku faraxsaneen.
Hadaba dhalinyaro Guur waxuu ku macaanyahay, oo naxariis, jaceyl iyo raaxo laga helaa markii la isku qanacsanahay, la is fahmaa, raali la iskaga yahay, waxwalbane sida hal qoys iyo hal qof loo sameeynaa.
Maahane ayadoo cadawga qabiil qalbigaaga ku rafanaa, qofka aad jeceshahay aadn u aqoonsaneen jaceylka ay ADIGA ku qabto guriga iyo nolosha ay diyaarka u tahay in ay kula dhisto ma arkidoontid nolol dhameeystirin mana dhadhamin doontid waxa la yiraahdo jaceeyl oo buuxa.
3. Shaqada: Inta badan dadka soomaalida ah waxeey moodaan in jagooyinka ay haayaan ay u haayaan dadka gooni ah ama qabiilka ay ka tirsanyihiin.
Sidaas darteed waxaa dalka soo maray xili aan cidna shaqo lagu siinin ilaa magaca qabiil maahane. Aqoon iyo shahaado waxeey noqdeen wax armaajooyinka lagu sharaxdu, waxaana la gaaray heer laga xishoodu in shahaada jaamacadeed la sheegto maxaayeelay wax laga helaa ama lagu sameeysanaa maba jirto.
Maantay sidoo kale waxaa dhacay in qofwalba oo shaqo u doonto shirkad ka mid ah shirkadaha soomaalida ah ee shaqeeya dalka dibadiisa iyo gudahiisa in la weeydiiyo qabiilkiisa ee aan la warsanin aqoontiisa iyo shaahaadadiisa.
Waxaana shaqo kasta ka leh qofka aqoonta iyo waayo aragnimada u leh shaqada ninka magac ahaan u dhaw maamulaha ama milkiilaha shirkadaas.
Sidoo kale dadka qanacsada maantay waxeey isku raadsadaan qabiil, waxeeyna si cad kuugu sheegaayaan inaysan ku kalsoonan karin qof aan ku qabiil aheeyn.
Arintaan waxeey dhibee qofka dhalinyarada ah oo waxbarashada dhameeyay diyaarkana u ah inuu la shaqeeysto dad soomaaliyeed oo ka faaiideysto aqoontiisa iyo aqligiisa.
Waxaa badatay shaqo la'aanta iyo waxbarasho la'aanta heeysata dhalinyarta soomaaliyeed, maxaayeelay waxwalba waxaa aqoonsi iyo ogolaansho looga dhigay QABIIL.
Waxaad maantay la kulmi kartaa qof dhalinyaro ah oo waxbarasho ilaa heer jaamaceed ka soo baxay, saasta ay tahay aysan jirin meel oo shaqo u doonto, waddo kastane laga soo xiray.
Marka waa suaale goormeen ka faaiideysan doonaan dadkeena leh aqoonta maxkasdooda iyo aqligooda?
Goormeen ka xoroobe doonaa cudurkaan ku dhacay qofwalba oo soomaali ah, kana reebay horumarka aduunka iyo wada shaqeeynta caalamiga ah?
Dhalinyaro waa in aan wada shaqeeyno, kana wada hadalno sida aan kaga hortagi laheeyn dhibaatooyinka noo goonida ah oo uu sida qaaska ah noogu haayo QABIILKA.
Waa in aan fahanaa in aan xaq u leenahay nolol, cadaalad iyo nabadgelyo aan laga sugeeynin oday bac madow wata oo magaca qabiil dulmiga iyo kala sareeynta bulsha weeynta soomaaliyeed ku holciya.
Waa in aan ka maarmanaa magaca qabiil, waa in aan ka maarmanaa daneyste, duleeyaha iyo qiyaanaloow nala sheeganaa soomaalinimada.
Waa in aan ku kalsoonaa aqligeena , aqoonteena iyo bulshadeena, oo aan iska hilmaano reer hebel ayaan ahaan jiray. Waa in aan hal miis wada fadhiisano anagoo ku wada hadleeyno magaca DHALINYARADA SOOMAALIYEED, oo aan loo fiirineeynin qabiil iyo tiro dad degen gobol, lana liideynin kuwa naga mid ah, ayadoo laga fekeraa magaca qabiil oo ay wataan.
"Ba'ii waa Qabiil, waa midkii qayrkeen naga reebay, waa midkii gumeysiga iyo gardaradaan na baday. Qabiil waa qaran dumiye. Qabiil waa cadawga nolosheena iyo nabadeena."
W/Q Ifraax Yusuf A. G (Ifka)
dhalinyarta maantay iyo qabiil maxaa kala heeysta? Samsam Axmad (samsam_1989@hotmail.com)‏